Aspire: I-Influencer Marketing Platform yokuKhula okuPhezulu kwaShopify Brands | Martech Zone
Ukuba ungumfundi okhutheleyo we Martech Zone, uyazi ukuba ndineemvakalelo ezahlukeneyo ukuthengisa okunempembelelo. Umbono wam wentengiso enempembelelo ayikuko ukuba ayisebenzi… kukuba kufuneka iphunyezwe kwaye ilandelwe kakuhle. Kukho izizathu ezimbalwa zokuba:
Thenga Ukuziphatha -Abaphembeleli banokwakha ulwazi lohlobo, kodwa bangaqinisekanga ukuba undwendwe luthengile. Yingxaki enzima leyo… apho umenzi wempembelelo asenokungahlawulwa ngokufanelekileyo okanye ukuthengisa imveliso ingekho apho inkampani inqwenela ukutyala imali eninzi.
Momentum -Ndisebenze neempawu kwixesha elidlulileyo, ndiyazi ukuba kuthatha iinyanga ngamanye amaxesha ukufudumala uluntu lwam kwisisombululo. Xa iinkampani zingaboni iziphumo zangoko, zihlala ziqhuba. Ndineziphumo ezincomekayo ngeempawu ezisebenze nam unyaka okanye ngaphezulu… kodwa ezo zifuna ukwenza u-1 kunye novavanyo olwenziwayo azinakuphumelela.
umkhondo -Kulo lonke uhambo lwabathengi, kukho iziphelo ezahlukeneyo… kwaye ayizizo zonke ezinokulandelelwa emva emsebenzini wam njengomphembeleli. Ndingakhankanya uphawu kwiprizenteyishini okanye kwipodcast kwaye abaphulaphuli bam abayi kusebenzisa i-URL yesiko, ikhowudi yesaphulelo, okanye bangene apho beve khona ngophawu. Kwinkampani, kubonakala ngathi khange ndisebenze. Kwaye, iyandikhathaza into yokuba andizange ndifumane tyala.
I-Ecommerce lishishini elingakholelekiyo ukusebenza kulo kuba uhambo lweemveliso ezikwi-Intanethi luhlala luyinto entle ecocekileyo. Oku kuyinyani kunye nentengiso ye-influencer kwi-ecommerce ngokunjalo. Yiyo loo nto kukho abasebenzisi beYouTube benza izigidi zeedola ngonyaka kumathuba okuthengisa aphembelela… balahla ikhonkco kwinkcazo yomboniso kwaye amawakawaka abalandeli babo banokongeza imveliso kwinqwelo yabo. Ngalo lonke ucofa kunye nokuguqulwa okulandelekayo, zombini uphawu kunye nefuthe bayakuvuyela ukusebenzisana omnye komnye ukuqhuba ukwazi ngakumbi kunye nokuthengisa.
Ubhubhani ubususile uninzi lobomi bethu kwi-Intanethi, ukusuka kwindlela esinxibelelana ngayo ukuya kwindlela esithenga ngayo. Ngapha koko, i-IBM isandula ukuxela ukuba ubhubhane uye wakhawulezisa utshintsho kwi-e-commerce ngokurhabaxa iminyaka 5.
Namhlanje, uluntu lwedijithali lulawula ilizwe lezorhwebo kunye neempawu ziqala ukuqonda ixabiso elandayo lotyalo-mali kubaphembeleli - oosaziwayo bemithombo yeendaba zentlalo abathe bafumana ukuthenjwa ngabaphulaphuli babo kunye namandla okuguqula iimbono zabo kunye nezigqibo zokuthenga.
Kutheni ukuthengisa ngokuPhembelelayo?
Kukho iingenelo ezibalulekileyo ekusebenzeni nabaphembeleli kunye nokwakha oonozakuzaku bohlobo:
Iingcebiso ezinyanisekileyo -Xa unozakuzaku eluthanda ngokwenene uphawu, bayakuposa ngalolo phawu amatyeli amaninzi-ngamanye amaxesha ngaphandle kokuba #iposti exhasiweyo-inika ubungqina ekuhlaleni.
Abaphulaphuli abahlukeneyo – Unozakuzaku ngamnye unempembelelo kwindawo yakhe. Bamele abathengi abathagethiweyo bohlobo ngalunye kwaye bathethe ngophawu ngendlela enxulumeneyo.
Ukuveliswa komxholo -Ngenxa yokuba abaphembeleli baphuhlisa owabo umxholo, unokukala uphuhliso lomxholo wesitishi esinqamlezayo kangangoko unqwenela…
Ulawulo lweMicimbi -Abaphembeleli sele betyala imali eninzi kwimicimbi ephilayo kunye nosasazo, ukubonelela ngamathuba akhethekileyo kunye nasondeleyo okubonisa uphawu lwakho kubaphulaphuli babo.
Iindleko eziphantsi-nge-Acquisition -Oonozakuzaku beBrand benza ukuba iibrendi zifumane ngaphezulu ngexabiso eliphantsi, njengoko iibrendi zinokutshixeka kumaxabiso kunye noonozakuzaku ngaphambili ukutshintshiselana ngentsebenziswano yexesha elide.
Ukugxothwa – Oonozakuzaku bophawu bahlala bevuma ukuba bakhetheke kuphawu phakathi kolu shishino, bevumela iibrendi ukuba zilawule indawo yentengiso kwisondlo sabo.
Aspire: Influencer Marketing Dibana Ecommerce
I-Aspire liqonga lokuthengisa elinempembelelo eyenzelwe i-ecommerce. Iqonga libonelela:
UFundo lwe-Influencer -Amandla okukhangela kunye nokunxibelelana nabaphembeleli abangaphezu kwezigidi ezi-6, abalandeli bohlobo, iingcali zeshishini, kunye nokunye ngokucofa iqhosha.
Ulawulo lobudlelwane -ukulawula ngokufanelekileyo amaphulo empembelelo, iinkqubo ezidibeneyo, ukutyalwa kwemveliso, kunye nokunye - ngaphandle kwemida.
Ukuthumela ngokuzenzekela kunye nokulandelela -abaphembeleli beenqanawa kwiimveliso abazifunayo kwaye babelane ngolwazi lokulandela umkhondo-ukuthatha zonke iinkqubo zezandla ezandleni zakho.
promotion -Inqwaba yenza iikhowudi zokuthengisa ezikhethekileyo zeShopify kunye namakhonkco adibeneyo kuye wonke umntu onempembelelo, ngaphandle kokushiya iqonga.
I-ROI enomlinganiselo -linganisa imbuyekezo kwinkqubo yakho yempembelelo ngokucofa, ukusetyenziswa kwekhowudi yokuthengisa, okanye ukufikelela. Xelela ibali elipheleleyo lendlela iimpembelelo eziqhuba ngayo ukukhula kwexesha elifutshane kunye nexesha elide.
Ukudalwa kokuqukethwe -Zisa uchuku lomntu kwiitshaneli zakho zentengiso enomxholo ophembelelayo okhawulezayo ukuvelisa, ongabizi kakhulu, kwaye ohlukeneyo. Emva koko nyusa iintengiso ukwenza i-buzz ngakumbi.
Ivenkile yokudibanisa -Yandisa i-Aspire's Shopify indibaniselwano yamava enziwe ngokwezifiso onokuvuka usebenze ngemizuzu, kubandakanya ukukwazi ukuthumela kunye nokulandelela iimveliso okanye unyuso.
Incwadi ye-Aspire Demo
tags: Abathunywa begamaindleko ngentengo nganyeukuthengisa okunempembeleloiqonga lokuthengisa elinempembeleloIimpembelelo zokuthengisaukulandelela ukuthengisa impembeleloUkulawulwa kobudlelwane obunempembeleloukulandelela umkhangeliIikhowudi zokwazisathengashopify indibaniselwano